Akhriso Qisadii Iyo Taariikhdii Saxaabigii Weynaa Ee Al Rabiic Binu Ziyaad Al Xaarithi. – Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
August 3, 2013 August 2, 2013 1
Al-Rabiic Binu Ziyaad ayaa yiri “alla ayaan badnidaa, waxaana kuu sugnaatay meel loo dheelmado meeshii ugu wanaagsanayd”, wuxuuna ula jeeday Jannada.
Markii uu arkay Abuu Muusaa Al-Ashcariyi sida uu Al-Rabiic uga walbahaaray geerida sida saxariirta leh ugu timid walaalkiis, ayaa waxaa la qumanaatay inuu hoggaaminta ciidanka uu uga tanaasulo Al-Rabiic, sidii ayuuna Rabiic ula wareegay hoggaaminta ciidanka, waxayna aadeen magaallada Suus si ay u furtaan.
Ciidamadii muslimiinta ee uu hoggaaminayay Al-Rabiic ayaa sidii hufadii oo kale hal mar u galeen goobihii ay degganaayeen gaallada. Dagaal ba’an oo dhex maray ciidamadii muslimiinta iyo gaallada kadib, wuxuu Eebbe (sw) sabab uga dhigay Al-Rabiic Binu Ziyaad inuu furto magaalladii la oran jiray Manaadir. Waxay muslimiintii laayeen dagaalyahaniintii gaallada ahaa, waxayna soo qafaasheen ubadkoodii, iyagoo hantidoodiina intuu Alle doonay qaniimaystay (qaniimada waa hantida laga soo helo jihaadka).
Sidoo kale, waxaa kaloo dadkii la qafaashay ku jiray addoon u shaqayn jiray guddoomiyaha degmada, wuxuuna haystay markaas lacag gaaraysa 300 000 oo dirham, (lacag aad iyo aad u fara badan) si uu u siiyo sayidkiisa. Al-Rabiic ayaa ku yiri ninkii “inteed ka keentay lacagtan faraha badan?!”. Wuxuu yiri “waxay ka timid mid ka mid ah tuulooyinka uu xukumo sayidkayga”. Al-Rabiic ayaa ku yiri “ma tuullo kasta waxay bixisaa lacagtaan oo kale sannad kasta”. Wuxuu yiri “haa”. Al-Rabiic ayaa yiri “siday ku dhacday?!”. Wuxuu yiri “lacagtaan waxaan ka soo saarnaa faasasyadeena iyo dhididkeena” oo uu ula jeeday lacagtaas waa waxaan soo shaqaysanay oo aan ku soo tacabnay.
Markii uu qaboobay dagaalkii, ayaa waxaa Al-Rabiic Binu Ziyaad oo ahaa hoggaamiyaha ciidanka u yimid guddoomiyihii degmada, isagoo doonaya inuu bixiyo lacag furasho ah. Al-Rabiic ayaa ku yiri “waan ku sii deenayaa haddaad muslimiinta u badiso lacagta furashada”. Guddoomiyihii degmada “imisaad doonaysaa?”. Al-Rabiic Binu Ziyaad “waxaan dhulka ku qotominayaa warankan, dabadeedna waxaad korkiisa ku shubaysaa dahabka kiisa huruudka ah iyo fiddada ama qalinka ilaa aad ka qariso qarin”. Guddoomiyhii degmada wuxuu yiri “waan oggolahay”, wuxuuna kaasafoortadiisa ka soo saaray dahabkii kala duwanaa, isagoo warankii dhulka lagu qotomiyay korkiisa ku shubay jeer dahabkii ay qariyaan waranka.
Warqaddii loo soo diray Al-Rabiic, ayaa waxaa ku qornaa hadalladan “amiiral mu’miniinka Mucaawiye wuxuu ku amrayaa inaad dahabka kiisa huruudka ah iyo kiisa cad (qalinka) kana mid ah qaniimooyinka jihaadka aad u dhigtid bankiga dhexe ee muslimiinta, wixii intaas ka soo harana aad u qaybisid mujaahidiinta”, taasina waa mid si toos uga hor imaanaysa qodobbada ku cad nusuusta qur’aanka. Waxaan ognahay inuu Eebbe (sw) qaybiyay sida loo kala qaadanayo hantida laga soo helo jihaadka, iyadoo shan qaybood qayb la dhigayo baytul-maalka, halka inta soo hartayna loo qaybinayo mujaahidiinta, iyadoo uu qaybinayana amiirka jihaadka.
Maalintii jumcada ee xigtay markay timid, wuxuu Al-Rabiic Binu Ziyaad u soo baxay salaaddii jumcada isagoo xiran dhar cadcad. Dadkii ayuu u jeediyay khudbaddii jumcada, dabadeedna wuxuu yiri “dadoow waan ka noogay noloshan ee waan duceenayaaye ee aamiin ii dhaha ducadayda” kadibna wuxuu ku duceystay “Ilaahayow haddaad kheyr ila doonaysid xaggaaga ii qibloow oo i oofso si degdeg ah oo aan dib dhigid lahayn”, dadkiina ducadiisa ayeey aamiin u yiraahdeen. Maalintaas qoraxdeeda ma dhicin jeer uu ka dhinto saxaabigii geesigii ahaa ee dunidan dhow ka doortay la kulankii Eebbe (sw). Ilaahay ha ka raalli noqdo, hana u naxariisto saxaabigii jaliilka ahaa ee Al-Rabiic Binu Ziyaad Al-Xaarithi.
La Soco Maalinta Berri Ah Kobciye.com Iyo Qisada Saxaabiga Xigo Haduu ALLE Idmo.
Gabadh Kastoo Muslim Ah Waa iney Ogaataa In Qaas U Leedahay 5 Arimood Oo Aad U Qiimo Badan
KaLaFoGe October 27, 2014 October 27, 2014
Cuntada Cubsada ku Badan Tahay oo Sababta Arimo La Yaab Leh..
KaLaFoGe January 28, 2015 January 28, 2015
Maryan Mursal oo sharuud ku xertay kusoo laabashadeeda dalka “Akhriso Sababta”.